10ka Taleefan ee ugu waxqabadka wanaagsan July 2021 | Androidsis
Top 10 Taleefoonada waxqabadka ah ee July 2021
Haaruun Rivas | 06/07/2021 11:11 | Aaladaha Android, Noticias
Mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan, caan ka ah iyo aaminka adduunka Android waa, shaki la'aan, AnTuTu. Waana taas, oo ay weheliso GeekBench iyo aagag kale oo tijaabooyin ah, tan marwalba waxaa naloo soo bandhigayaa bartilmaameed la isku halleyn karo oo aan u qaadanayno tixraac iyo taageero, maadaama ay na siineyso macluumaad la xiriira markay tahay ogaanshaha sida xoogga leh, dhakhso leh oo wax ku ool ah waa. mobile, wax kastoo.
Sida caadiga ah, AnTuTu badanaa waxay sameysaa warbixin bille ah ama, halkii, liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa, bilba bil. Sidaa darteed, fursadan cusub waxaan ku tuseynaa bisha kala ee June, oo ah tii ugu dambeysay ee iftiiminta la tuso una dhiganta bishan July. Aan aragno!
1 Kuwani waa taleefannada gacanta ee ugu sarreeya ee leh waxqabadka ugu wanaagsan ee bisha Luulyo
2 Kala-dhexaadka ugu fiican
3 Black Shark 4 Pro, mobilada ugu awoodda badan xilligan
Kuwani waa taleefannada gacanta ee ugu sarreeya ee leh waxqabadka ugu wanaagsan ee bisha Luulyo
Liiskan ayaa dhowaan shaaca laga qaaday oo, sida aan iftiiminno, waxaa iska leh bishii Juun ee la soo dhaafay, laakiin waxay khuseysaa bisha Juun maadaama ay tahay tan ugu dambeysay ee ugu sarreysa, markaa AnTuTu waxay tan ku siin kartaa qallooca qiimeynta soo socota ee bishaan, oo aan arki doonno bisha Ogosto. Waa kuwan kuwa casriga ah ee ugu awoodda badan maanta, sida ku xusan barxadda tijaabada:
Maaddaama lagu faahfaahin karo liiska aan kor ku soo lifaaqnay, Black Shark 4 Pro iyo Red Magic 6 Pro waa labada xayawaan ee ku yaal labada boos ee hore, oo leh 849.822 iyo 833.276 dhibco, siday u kala horreeyaan, iyo farqi aan tiro badnayn oo u dhexeeya iyaga. Telefoonadan casriga ahi waxay leeyihiin mobilada gacanta Qualcomm's Snapdragon 888.
Kaalinta saddexaad, afraad iyo shanaad waxa fadhiya OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro iyo Vivo X60 Pro +, oo leh 824.459, 818.689 iyo 811.808 dhibcood, siday u kala horreeyaan, si loo xiro shanta meelood ee ugu horreeya liiska AnTuTu.
Ugu dambeyntiina, qeybta labaad ee miiska wuxuu ka kooban yahay iQOO 7 (811.508), OnePlus 9 (810.916), Realme GT (810.141), ROG Phone 5 (808.576) iyo Xiaomi Mi 11 Ultra (797.379), si isku mid ah , Lixaad ilaa tobnaad.
Kala-dhexaadka ugu fiican
Si ka duwan liiskii ugu horreeyay ee horey loo sharraxay, kaas oo kaliya ay maamusho Chips processor-ka Snapdragon 888, liiska 10-ka maanta ee ugu wanaagsan uguna wanaagsan ee sameeya taleefannada dhexdhexaadka ah ee Julaay 2021 ee AnTuTu waxay leedahay taleefannada casriga ah oo ay la socdaan processor-yada MediaTek., Kirin iyo, dabcan, Qualcomm. Samsung's Exynos, sidii daabacadihii la soo dhaafay, meelna laguma arko markan.
Ka dib markii Xiaomi Mi 11 Lite 5G, oo ku guuleystey inuu calaamadeeyo shay sare oo 531.531 ah oo ay ku shaqeyneyso Mediatek's Dimensity 820, Honor 50 Pro, oo ay maamusho Snapdragon 778G, ayaa la dhigayaa booska labaad, iyadoo leh dhibco dhan 513.422 . Tan waxaa ku xiga Honor 50, oo leh dhibco dhan 505.028. Qaybta dambe waxay la shaqaysaa Snapdragon 778G sidoo kale.
Oppo Reno6 5G, Realme Q3 Pro iyo Redmi 10X 5G waxay xaqiijiyeen booska afraad, shanaad iyo lixaad, siday u kala horreeyaan, oo leh tirooyin 481.288, 452.616 iyo 452.596. IQOO Z3 wuxuu kujiraa booska toddobaad, oo leh sumad ah 445.827 dhibcood.
Huawei Nova 8 Pro iyo Nova 8 waxay ku jiraan kaalinta sideedaad iyo sagaalaad, oo leh 438.936 iyo 435.681, siday u kala horreeyaan. Kan hore waa taleefan casri ah oo lagu qalabeeyay Kirin awood badan oo 985 ah, halka ta labaadna lagu sheegay System on Chip Ku Huawei New 7Iyada oo Kirin 985 ah oo aan la tixgelin karin 435.306 dhibcood oo laga helay barta tijaabada, waa taleefankii ugu dambeeyay ee liiska AnTuTu.
Noocyada kala geddisan ee Chipset-ka ee aan ka helno liiskan waa kuwo iska cad, in kastoo aysan ku jirin moodeellada Exynos, laakiin tani horeyba waa arrin u taal Samsung, maadaama aysan sidaas tartan ugu jirin qaybtan, marka la eego waxqabadka iyo awoodda Tani waxay dhacdaa ka dib Mediatek iyo Huawei, oo ay wataan Kirin, ayaa ka tagay Qualcomm liisaskii hore. Horeba soo saaraha Mareykanku wuxuu dhigay baytariyada waqti fog kahor wuxuuna ku guuleystey inuu dhowr Chipset ku rido dusha sare, isagoo mid kamid ah uga tagayo meesha ugu horeysa
Black Shark 4 Pro, mobilada ugu awoodda badan xilligan
Si loo siiyo aqoonsiga uu mudan yahay, waxaan ka hadli doonnaa astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee taleefanka casriga ah ee ugu awoodda badan xilligan, sida ku xusan dusha sare ee ugu sarreeya oo leh waxqabadka ugu wanaagsan illaa iyo hadda sannadkan.
Black Shark 4 Pro waa aalad ciyaar oo la imaanaysa shaashad Super AMOLED oo ah 6.67-inji oo leh qaraar FullHD + ah 2,400 x 1,080 pixels iyo 20: 9 qaab muuqaal ah. Muujintaani waxay muujineysaa heer sare oo cusbooneysiin ah 144Hz, taageerada HDR10 ee si caddaalad ah oo sax ah iyo midabaynta midabaynta, iyo dhalaalka ugu sarreeya ee 1,300 nits.
Ku saabsan processor -kaaga, wuxuu adeegsadaa Qualcomm's Snapdragon 888, Chipset -ka ku nool calooshiisa oo awood u leh inuu gaaro inta jeer ee ugu badnaan ah 2.84 GHz.Qalabkan waxaa weheliya Adreno 660 GPU. Intaa waxaa dheer, aaladda waxaa lagu soo bandhigay dhowr nooc, oo noqon kara 8, 12 ama 16 GB iyo 256 ama 512 GB oo ah meel lagu kaydiyo gudaha. Dabcan, ma jirto wax taageero ah oo loogu talagalay kaarka microSD, sidaa darteed terminal -kani ma laha ballaarinta xusuusta ROM ee la heli karo.
Dhanka kale, Xiaomi's Black Shark 4 Pro wuxuu ku faanaa nidaam kamarad gadaal oo saddex -laab leh a 64 MP module weyn oo leh f / 1.8 aperture, 8 MP dareemayaal sare oo kamarad ah oo leh f / 2.2 aperture iyo 2 MP toogtehii ugu dambeeyay iyo f / 2.4 aperture oo loogu talagalay sawirrada makro. Dhanka kale, waxay soo bandhigaysaa 20 MP kamarad hore oo leh f / 2.5 aperture daloolka shaashadda oo ku yaal qaybta dhexe ee shaashadda.
Bateriga terminalkan waa Awoodda 4,500 mAh waxayna taageertaa tikniyoolajiyadda degdegga ah ee 120 W. Thanks to this, moobaylka waxaa laga qaadi karaa 50% kaliya 5 daqiiqo iyo 100% qiyaastii 15 daqiiqo. Tani shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan, isla mar ahaantaana, astaamo xiiso leh.
Astaamaha kale waxaa ka mid ah nidaamka qaboojinta, aqristaha faro-ku-dhejinta oo dhinac dhinac ka taagan, Android 11 oo hoos timaada MIUI 12.5, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Bluetooth 5.2, NFC si loo bixiyo lacago aan xiriir lahayn (aan lala xiriirin), jaakad 3.5 ah oo loogu talagalay dhegaha-dhegaha iyo stereo kuwa hadlaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Top 10 Taleefoonada waxqabadka ah ee July 2021
7-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee kombiyuutarka loogu talagalay Android
6-da barnaamij ee ugu fiican volcanoes iyo dhulgariirrada ee Android